बाह्रै महिना पानी आइरहने अनौठो रुख !! – live 60media
बाह्रै महिना पानी आइरहने अनौठो रुख !!
प्रकृतिले हामिलाई धेरै अनौठा चिजहरु दिएको छ । ती सबै चिजहरु बारे हामिलाई थाहा पनि हुँदैन । तर एक्कासी देखिदा अनौठो लाग्ने गर्छ ।हामिले धेरै प्रजातीका रुखहरु देखेका छौ । तर यस्तो रुख पनि छ, जसबाट पानी आइरहने गर्छ । कुरा सुन्दा अनौठो लाग्ला, तर यो अनौठो रुख भारतमा छ । यस रुखले विज्ञानलाई चुनौती दिदै सबैलाई चकित पारेको छ ।
यो रुख हरियाणाको नुहे जिल्लाबाट ३ किलोमिटर टाढा रहेको अरावली पर्वतमालामा रहेको एक मन्दिरको छेउमा रहेको छ । लगातार रुपमा पानी आउँने यस रुखलाई हेर्ने मानिसको लर्को लाग्ने गर्छ ।त्यहाँका मानिसहरुले यस रुखबाट आएको पानी पिउदा रोगहरु हट्ने विश्वास पनि गर्छन् । वैज्ञानिकहरुले यस बारे अनुसन्धान गरेपनि पानी आउने कारणबारे पत्ता लगाउन सकेका छैनन् ।
दर्शालुहरुले आस्थाको केन्द्र मान्दै कसैको दिव्य शक्तिको वास भएको बताउदै आएका छन् । नल्हडेश्वर नामले चिनिएको यस मन्दिरमा धेरै भक्तजनहरु आउने गर्छन् । यहाँ आएका मानिसहरुले मन्दिर दर्शन पछि रुखको पानी लिएर जाने गर्छन् ।
यो पनि : आज शनिबार : साढे सातको दशा कटाउन के गर्ने ?:आज शनिबार । सातामा बल्ल त बिदा भयो भन्दै अलिबेर सुत्ने बानी छ भने हटाउनुहोस् किनकी कहिले ढिला कहिले चाँडो उठ्ने बानी स्वास्थ्यको लागि राम्रो होईन । त्यसमाथि आज शनिबार भगवान शनिदेवको पूजा आराधना गरी ग्रह दशा हटाउने दिन । त्यसैले बिहानै ३ बजेदेखि काठमाडौंको न्यूरोडमा रहेको संकटा मन्दिरमा निकै भिड लाग्ने गर्छ ।
धार्मिक ग्रन्थहरुमा शनिबारलाई विशेष दिनको रुपमा मान्ने गरिएको छ । त्यसैले पनि यसदिन पुजापाठ बढी गरीन्छ । बिहानै पिपलको बोटमा पानी चढाउनेहरु पनि उत्तिकै हुन्छन् । ब्रहमान्डका नौ ग्रहहरूमा, शनिलाई न्यायाधीश मानिन्छ । त्यसैले उनको पुजा आराधना गर्नाले मनमा शान्ति परिवारमा सुख तथा काममा सफलता मिल्छ ।
के हो साढे सात दशा ?ज्योतिषका अनुसार साढे सात दशाले ठुलो अनिष्ठ निम्त्याउँछ । मानिसको मृत्युसम्मै हुने दशा हो, साढेसाती । शनिको दशा र बक्र दृस्टी जसमा पर्छ उनीहरुले शारीरिक समस्या, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, र रोग आदि लगायतको समस्याहरु झेल्नु पर्छ ।
शनि ग्रहलाई न्याय र कर्मफलको कारक ग्रहको रुपमा चिन्ने गरिन्छ। अपवादका रुपमा मात्रै मानिसलाई साढे सात दशाले लाभ गर्छ । नत्र तपाईको दशाले पुरै परिवार अनिष्ट गर्छ साढेसातीले ।शनिको साढे सातको दशा कुण्डलीको अध्ययन गरेर मात्रै थाहा हुन्छ । ज्योतिषको अनुसार शनि ग्रहको साढे सातको दशा ७ वर्षसम्म चल्छ ।
तर नआत्तिनुहोस् तर शनिदेवलाई खुशी पारेर तपाईले आफ्नो जीवनमा नयाँ उर्जा ल्याउन सक्नुहुन्छ । शनिको साढे सात दशाको दोष निवारण गर्न पनि सकिन्छ ।शनिबार पारेर फलामका सामाग्री शनिदेवको मन्दिरमा चढाउनुपर्छ ।हरेक शनिबार शनिको पुजा गर्नुहोस्,पिपलको बोटमा पनि विशेष पूजा गर्नुहोस् ।खुर्सानीमा पानी छर्कनु पनि राम्रो मानिन्छ ।
शनिबार कालो तिल दान गर्नुहोस्।ज्योतिष शास्त्रका अनुसार छालाका जुत्ता र चप्पल पनि दान गर्दा शुभ मानिन्छ,हरेक हप्तामा शमीको रूखलाई पनि पूजा गर्नुहोस्।हर शनिबार हनुमानको सामुन्ने सर्सुको तेलको दीप बाल्नुहोस् ।नुवाईधुवाई गरी हनुमान चालीसाको पाठ गर्नुहोस् ।
साढे साती दशाले राशिअनुसार फरकफरक असर देखाउछ ।जान्नुहोस् कुन राशिमा के असर पार्छ ?1.मेष राशिमा शनिको साढे सातको समस्या देखा परेमा कामको तनाव र चिन्ता बढि हुने भएकाले कुनै पनि निर्णय हतारमा नलिनू ।2. वृष राशिमा शनिको साढे सातको समस्या देखा परेमा कुनै कुराको थालनी पूर्व आफन्त वा विश्वासी नाताका मानिससंग सल्लाह लिनू ।
3. मिथुन राशिमा शनिको साढे सातको समस्या देखा परेमा आर्थिक विषयमा सोचविचार गर्नू ।4. कर्कट राशिमा शनिको साढे सातको समस्या देखा परेमा जान्नेबुझ्ने जानकार व्यक्तिसँग परामर्श गरेर अघि बढ्नू ।5. सिंह राशिमा शनिको साढे सातको समस्या देखा परेमा कुनै पनि सवारी साधन प्रयोग गर्दा होस पुर्याउनू ।
6. कन्या राशिमा शनिको साढे सातको समस्या देखा परेमा नहतारीकन सुझबुझका साथ काम गर्नू,7. तुला राशि मा शनिको साढे सातको समस्या देखा परेमा प्राप्त भएको धन समेत हातबाट फुत्कने भएकोले ख्याल पुर्याउनू ।वृश्चिकमा शनिको साढे सातको समस्या देखा परेमा अपजस तथा अवरोध खेप्नुपर्ने भएकोले होसीयारी हुनू ।
8. धनुमा शनिको साढे सातको समस्या देखा परेमा मेहनत अनुसारको फल पाउन सकिन्न । शंका गर्नेहरु बढ्छन् । बेचैनी बढ्छ । विवाद झेल्नुपर्छ । सचेत हुनू ।9. मकर राशिमा साढे सातको समस्या देखा परेमा ठुलो निर्णय लिनु चुक्नुहुनेहुँदा सुझाव लिएर काम गर्नू
10. कुम्भ राशिमा साढे सातको समस्या देखा परेमा खुट्टा तान्नेहरु सक्रिय हुने भएकोले शनिलाई प्रसन्न गराउर्नू,11. मीन राशिमा साढे सातको समस्या देखा परेमा भाग्य अनुकूलता नभएमा जस्तो मेहनत गरेमा पनि बनेको काम फूत्कन्छ ।शान्त रहन हरेक शनिबार तेल दान गर्नुपर्छ।*सकारात्मक सोँच र सबैको भलो चिताउँदा तपाईको प्रगति हुन्छ ।
← सुनको मुल्यमा इतिहासमै पहिलो पटक यतिधेरै गिरावट !
एक युवती र ४ पुरुष गैंडाको खागसहित पक्राउ →